♥♫ လဲ့လဲ့ (ကွန်ပျူတာ) မကွေး ၏ကဗျာများစုစည်းမှု (၁) ♥♫ ~ မိုးညိုသား
♥♫ လဲ့လဲ့ (ကွန်ပျူတာ) မကွေး ၏ကဗျာများစုစည်းမှု (၁) ♥♫
12:31 AM ကဗျာ No comments
♥♫ သုံးရာသီအလွမ်း ♥♫
ကြွေကျရွက်ဟောင်း လတို့ ပြောင်းလဲ
မဟောင်းသေးပါ မမေ့ သာလို့ 
အုံ့ ခါမစဲ တသဲသဲနှင့် 
လရဲ့ဟေမာန် ဆောင်းရောက်ပြန်တော့ 
♥♫ လဲ့လဲ့ (ကွန်ပျူတာ) ♥♫
♥♫ မကွေး ♥♫
“မင်းဘ၀မှာ တစ်ခါမှ မရဘူးတဲ့ အရာကို
လိုချင်ရင် တယ်ဆိုရင် …ပေါ့....
မင်းတစ်ခါမှ မလုပ်ဘူးတဲ့ အလုပ်မျိုးကို
ဘ၀ရဲ့ ခေါ်ရာကို မလိုက်နဲ့ …
မင်းသွားချင်တဲ့ ဆီ ဘ၀ကို ခေါ်သွား …. ။
ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ အတွက် မင်းဖွေးလာတာ
မွေးဖွားလာလို့ ရှင်သန်နေရတာ မဟုတ်ဘူး …. ။
လူဆိုတာ မွေးတစ်နေ့ သေတစ်နေ့ပဲ .
ဘာမှ လွမ်းဆွေး တမ်းတ နေဖို့ မလိုဘူးလေ …
ရှေ့ကို ဆက်ပြီးလျှောက်ပါ သူငယ်ချင်း …
ဘ၀ ကို ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးနဲ့
မင်းအတွက် လိုအပ်လာတဲ့ အခါ
♥♫လဲ့လဲ့ (ကွန်ပျူတာ) ♥♫
သစ္စာမပြယ် ချစ်ပါတယ် ခင်
မျှော်ကိုးတယ်လေး ။ ။
♥♫ လဲ့လဲ့ (ကွန်ပျူတာ ) ♥♫
လယ်တီမြေသား မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်